Indlu ka-Pianella...ukuze uphumule futhi ujabule - I-Airbnb
Indlu ka-Pianella...ukuze uphumule futhi ujabule
Castel del Piano, Toscana, i-Italy
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Francesca
Indlu yethu, enye yezindlu ezindala kunazo zonke endaweni, ijabulela indawo yayo enhle ngoba ungafinyelela enkabeni yedolobhana lase-Casteldelpiano ngezinyawo kodwa sisemaphandleni ngakho iyindawo ekahle
Singamakhilomitha angu-37 ukusuka emagumbi okugezela ashisayo ase-Saturnia, nase-25 Bagno Vignoni nase-San Filippo.
Indawo yethu iphinde inikeze amathuba amaningi okuba abathandi bemvelo bachithe isikhathi , njengohambo lwezinyawo entabeni, ukuhamba ngebhayisikili ngezindlela ezizinikezele, noma ukugibela amahhashi.
Indlu yethu inkulu kakhulu futhi inemibala futhi inesitayela sayo sonke... ngakho kuhle ukuhlala lapho, ikhishi negumbi lokuphumula livulekile kakhulu, sinikeza izivakashi zethu ithuba lokusebenzisa ikhishi, igumbi lokuphumula elinakho konke okudingekayo ukwenza iholide libe lihle.
injabulo yokuhlala endlini yethu ubuhle bendawo nendlu, etholakala cishe ku-500m ukusuka enkabeni yedolobha, ezungezwe uhlaza phakathi kwezihlahla zezithelo nehlathi .
Sifaka enanini lesidlo sasekuseni esinokudla okumnandi okwenziwe yithi, ngoba sithanda ukupheka izithelo zezwe lethu elithandekayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Castel del Piano namaphethelo